Sei Us Sarudzai? - Shandong Chenan Machinery Co., Ltd
1.Professional R & D chikwata: pachake mhando nyanzvi mainjiniya, vaigona kugadzira uye kubereka 5 akabatana cnc machine, RV ematongerwo ukomba kubudiswa centre, hombe muforoma cnc centre nezvimwe mukuru-mugumo tsika michina.
2.Powerful machine nezvaanogona: We vane USA HASS Vertical machine Center, USA HASS Horizontal machine Center, Taiwan AWEA Gantry Five-Face machine Center, mhando mukatushura muchina uye azvikuya machine. Makore anopfuura 20 machine ruzivo kuitira unhu uye zvakarurama ose zvemaziso kupembedza zvikamu;
3.Advanced yokuedzwa midziyo: We kupinza UK RENISHAW muchiso Laser interferometer / USA mutungamiri muchiso batanidza kuyera muchina / UK RENISHAW muchiso ballbar hurongwa, pachake Laser autocollimator / Optical pamupendero Finder Dial geji, Dial chakarurama / mativi bhokisi / Marble mativi bhokisi uye kuita kuputira nemishonga chinyorwa / pasi nemishonga bvunzo / kumanikidzwa bvunzo, kuti tive nechokwadi muchina zvose pamwe akakwana kuita pamberi pakukurukura.
maawa 4.24 paIndaneti pashure-basa uye Processional pashure-basa chikwata, kupindura mubvunzo vatengi vake nenguva.